Uyilo Lwangaphakathi Umbala o-grey uthathwa ukuba uyadika. Kodwa namhlanje lo mbala uvela kwi-head-liners kwisitayile esifana ne-loft, minimalism kunye ne-hi-tech. Umbala ngumbala owuthandayo wabucala, uxolo, kunye nokuphumla. Imema kakhulu abo basebenza nabantu okanye ababandakanyeka kwiimfuno zengqondo, njengombala wangaphakathi ngokubanzi. Iindonga, ophahla, ifenitshala, amakhethini kunye namgangatho zigreyini. Amagxa kunye nokuhlala kwegrey kwahlukile kuphela. Igolide yongezwa ngeenkcukacha ezongeziweyo kunye nezixhobo. Kukwandiswa ngenxa yesakhelo somfanekiso.
Uphawu Lokwazisa Uphawu Luphawu
Uphawu Lokwazisa Uphawu Luphawu Isikhuthazo sokuphinda siqwalasele kwakhona uphawu kunye nokuhlengahlengisa ngokutsha yayizizo iinguqu kuguquko kunye nokudityaniswa kwenkcubeko yenkampani. Uyilo lwentliziyo alunakuphela lube luphawu lwentengiso, luvuselele intsebenzo ngaphakathi kunye nabasebenzi, kodwa kunye nabathengi. Umanyano oludibeneyo phakathi kwezibonelelo, ukuzibophelela kunye nomgangatho wenkonzo. Ukusuka kwimo ukuya kwimibala, uyilo olutsha lwadibanisa intliziyo kwi-B kunye nomnqamlezo wezempilo kwi-T. La magama mabini adityaniswe phakathi enza uphawu lubukeka njengegama elinye, uphawu olunye, ukudibanisa i-R kunye no-B kuyo. Intliziyo.
Uyilo Lophawu Uyilo lwe-EXP Brasil brand luvela kwimigaqo-nkqubo yobumbano kunye nentsebenziswano. Ukwenza umxube phakathi kwetekhnoloji kunye noyilo kwiiprojekthi zazo njengobomi beofisi. Into yokuchwetheza imele imanyano kunye namandla ale nkampani. Uyilo u-X luqinile kwaye luhlanganisiwe kodwa lukhanya kakhulu kwaye lububugcisa. Uhlobo lubonisa ubomi be studio, nezinto ezinobumba, oonobumba abafanelekileyo kunye nabangalunganga badibanisa abantu kunye noyilo, umntu ngamnye kunye nokudityaniswa, elula kwitekhnoloji, engabinamandla kunye neyomeleleyo, ephucukileyo kwaye eyomntu.
Iseti Yekofu Uyilo lwale nkonzo lwaphefumlelwa zizikolo ezibini zenkulungwane yama-20 iBauhaus yaseJamani kunye neAvant-garde yaseRussia. I-geometry eqondile engqongqo kunye nokusebenza kakuhle okucingisiswe ngokupheleleyo kuyahambelana nomoya weemboniso zala maxesha: "yintoni efanelekileyo yinto entle". Kwangelo xesha lilandela iindlela zanamhlanje umyili udibanisa izinto ezimbini ezahlukileyo kule projekthi. I-porcelain emhlophe yeklasikhi idityaniswa ngamabhanti akhanyayo enziwe ngeckey. Ukusebenza koyilo kuxhaswe ziziphatho ezilula, ezilula kunye nokusebenziseka ngokubanzi kwifom.
Indlu Usebenzisa iinkuni njengeyona nto iphambili eyakhayo, indlu igxotha amanqanaba ayo amabini ngokwecandelo, ivelisa uphahla oluqaqambileyo lokudibanisa nomxholo kunye nokuvumela ukukhanya kwendalo ukuba kungene. Indawo ephindwe kabini ichaza ubudlelwane phakathi komgangatho womhlaba, umgangatho ophantsi kunye nomhlaba. Uphahla lwentsimbi ngaphezulu kweempukane ezibukhali, luzikhusela kwimeko yelanga lasentshona kunye nokwakha kwakhona ivolumu ngokusisiseko, ukubiyela umbono wendalo esingqongileyo. Le nkqubo icaciswa ngokufumana ukusetyenziswa koluntu kumgangatho ophantsi kunye nokusetyenziswa ngasese kumgangatho ophezulu.
Ifanitshala Kunye Nefeni Fan
Ifanitshala Kunye Nefeni Fan Itheyibhile ye-Brise yenzelwe ngombono woxanduva lokutshintsha kwemozulu kunye nomnqweno wokusebenzisa abalandeli kunokuba yomoya. Endaweni yokuvuthuza imimoya enamandla, igxila ekuziva ipholile ngokujikeleza umoya kwanasemva kokucutha umbane womoya. NgeBrise Table, abasebenzisi banokufumana umoya opholileyo kwaye basebenzise itafile esecaleni ngaxeshanye. Kwakhona, iyangena kuyo yonke indalo kwaye yenza indawo entle.
Uyilo Lwangaphakathi Uphawu Lokwazisa Uphawu Luphawu Uyilo Lophawu Iseti Yekofu Indlu Ifanitshala Kunye Nefeni Fan